दाहालले भने– ‘पाँचै वर्ष ओली’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने संकेत गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको पनि उसले विरोध गरेको छ ।
बच्चा साटेको भन्दै सुत्केरी र उनका आफन्तले विरोध गर्दा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल तनावग्रस्त भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका–२६ की सनिता देवीलाई प्रसव पीडाले च्यापेपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनले बाटोमै बच्चा जन्माएकी थिइन् ।
खाडी तथा मलेसियामा अलपत्र नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी राख्न न्यूनतम मापदण्डको आश्रयस्थल (सेल्टर) खोल्ने बाटो खुलेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा मुख्य र सहायक गरी आधाभन्दा बढी सीमा स्तम्भ हराएका छन् । मंसिर पहिलो सातादेखि दुई देशको संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले अनुगमन गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तोकिएभन्दा थप ६ महिना ढिला हुने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र गठन भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूरा नहुँदा आगामी असोजमा कार्यावधि टुंगिने गरी समय थप्न लागिएको हो ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व विश्वमा बढ्दै गएको र विश्वको नजर यहाँ परेको विश्लेषण गरेको छ ।
दुई दूतावासमा प्रजातन्त्र दिवस
थाइल्यान्डको बैंकक र पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासहरूमा ६८औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस दीपावलीका साथ मनाइएको छ ।
निष्पक्ष न्यायसम्पादनको नेतृत्वकर्ता नै आफूविरुद्ध लागेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले अवहेलना मुद्दामा तारिख लिन अस्वीकार गरेका छन् । विभिन्न विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आफू जोडिएको न्यायसम्पादनमा सक्रिय भएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
कान्तिपुरविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति र प्रमाणपत्र विवादबारे समाचार लेखेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दर्ता गरेको मुद्दाको बिहीबारलाई पेसी तोकिएको छ ।
गुरुङलाई राज्यको डर, केन्द्रको भर
करिब ५ महिनादेखि ‘भूमिगत’ रहेका गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका अगुवा नेता विमल गुरुङलाई पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले ‘हत्या’ प्रयास गरिरहेको खुलासा भारतीय जनता पार्टीका सांसद सुरिन्दर सिंह आहलुवालियाले गरेका छन् ।
प्रदेश राजधानी विवाद: वार्ता असफल
प्रदेश सरकार र ‘वीरगन्ज राजधानी बनाउ संघर्ष समिति’ बीच मंगलबार भएको पहिलो वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
केबलकार बनाउन खुत्रुके अभियान
‘थोपा–थोपा मिलेर समुद्र’ भनेझैं पर्यटकीय गन्तव्य खप्तडमा केबलकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको १० रुपैयाँ खुत्रुके अभियानमा विद्यार्थीले सहयोग गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रालय र मन्त्री निवास तयार
जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकालि) को चार तले अधिकृत निवास भवनमा प्रदेश २ का चार वटा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ ।
बम विस्फोटमा पत्रकार र प्रहरी घाइते
पोखराको विजयपुर खोलाको पुलनेर अज्ञात समूहले राखेको बम विस्फोट हुँदा मंगलबार सञ्चारकर्मी र प्रहरी गरी दुई घाइते भएका छन् । घाइतेको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
‘अमात्यको निधनले प्राज्ञिक र कूटनीतिक क्षति’
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) का कार्यकारी निर्देशक प्रा. पन्नाकाजी अमात्यको निधनले मुलुकको प्राज्ञिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हत्या र चन्दा आतंक मच्चाउँदै आएका गुन्डा नाइके मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । बुधबार बिहान रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका भवानीपुरमा उनी प्रहरीको गोलीबाट मारिएका हुन् । पक्राउ गर्न गएको प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर भाग्न खोजेपछि प्रहरीको गोली लागेर उनी मारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बनी नसक्दै भाँच्चियो बेलिब्रिज
तातोपानी सीमा जोड्ने निर्माणाधीन लार्चाको बेलिब्रिज भाँच्चिएको छ । भदौदेखि निर्माण थालिएको पुल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सन्तुलन नमिल्दा मंगलबार क्षतिग्रस्त भएको हो ।
वित्थड चिर गाउँपालिकाले ८ र १० बाहेकका सबै कक्षाको परीक्षा गाउँपालिकास्तरीय गर्ने भएको छ । विद्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तर मापन गर्न र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।
ल्याइयो बुद्धको अस्तु
शाश्वत धाममा निर्माण गरिने बुद्धिस्ट सेन्टरका लागि गौतम बुद्धको अस्तु ल्याएर बौद्ध चैत्यको शिलान्यास गरिएको छ ।
गलत संस्कार बदल्दै किशोरी
मुस्लिम समुदायमा सम्बन्धविच्छेद (तलाक), बहुविवाह र मधेसी समुदायमा बालविवाह र दाइजो प्रथा अझै कायम छ । ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीलाई विद्यालय पठाउन नहुने मान्यता पनि उस्तै छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले जनचेतना तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर गलत परम्परा हट्न नसकेको भन्दै यहाँका किशोरीहरू संगठित भएर कुसंस्कारविरुद्ध सक्रिय हुन थालेका छन् ।
नारायणीमा प्रदूषण बढ्यो
नारायणगढका युवा व्यवसायी चन्दन अग्रवालले नारायणी नदीमा देखेको फोहोरमैला सामाजिक सञ्जालमा राख्दै यो नदी पनि वाग्मती जस्तै दूषित बन्दै छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।